Banengcindezi abakuleli abakwamanye amazwe - Ilanga News
Home Izindaba Banengcindezi abakuleli abakwamanye amazwe
Banengcindezi abakuleli abakwamanye amazwe
Abanye bathi kunzima ukuzwa ngabashonayo uma befonela izihlobo
UNKZ Zanele Buthelezi osebenza eBeijing, eChina, uthi uke wabhekana nengcindezi ngemuva kokuvaleleka ekhaya ngenxa yokubheduka kokhuvethe.
KUSHIYE isilonda emoyeni nasengqondweni kubantu abaningi ukuqubuka kwe-Coronavirus, edala iCovid-19, njengoba kudale ukuthi abasebe-nza noma abagobe amadlangala kwamanye amazwe, babhekane nenkinga yokubuyela emazweni abo ngendlela ejwayelekile uma kukhona isimo esiphuthumayo, esibadinga emakhaya.
Ngesikhathi usanda kuhlasela lo mkhuhlane, abanye abantu ba-seNingizimu Afrika abakwamanye amazwe, bebekhala ngokuthi kabakwazi ukufihla izihlobo zabo ngenxa yemigomo ehambisana nokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane emazweni amaningi, okukhona kuyona neyokuvalwa kwemingcele.
ILANGA likhulume nabanye abantu bakuleli abazinze emazweni aphesheya kwezilwandle ngenxa yomsebenzi, abathi leli gciwane lishintshe izinto eziningi empilweni yabo, kodwa babonga ukuthi basaphila.
UNkz Balungile Gumede waseMlazi, eThekwini, ongumculi nomlingisi ozinze eHamburg, eGermany – njengoba elingisa emdlalweni iThe Lion King kuleliya lizwe – uthi ngesikhathi iCoronavirus ihlasela, wayeseNingizi-mu Afrika.
Uthi nokho kubenzima, kodwa isimo sakhe njengeciko, sibengconywana uma siqhathaniswa nesozakwabo abazinze kuleli.
“Yebo waphela umsebenzi. Kwadingeka ukuba sivale kusukela ngoNdasa (March), wangonyaka odlule, kodwa ngikwazile ukuphila. Ngesikhathi simiswa ukusebe-nza, ngangivele ngisezinhlelweni zokubuyela ekhaya.
“Ngabuyela ekhaya ngahlala izinyanga eziwu-6, ngabe sengiyabuyela phesheya ngoba kunemali yesibonelelo engiyitholayo uma ngiseGermany, kodwa uma ngike nganyamalala khona izi-nyanga ezingaphezu kweziwu-6, kangiyitholi.
“Ngale kwalokho, kwakumele ngibuyele khona ngoba kwakumele ngizobheka indawo engihlala kuyona, ngiqhubeke ngikho-khele izidingo zami zanyanga zonke. Leyo mali (yesibonelelo) iwenzile umehluko, kodwa beyinganeli ngoba kwakumele ngiqhubeke nokondla ekhaya,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi ebuya kuleli, kwaqala kwaba nzima kakhulu ukuba ahlangane nabantu nezihlobo zakhe njengoba babemsaba.
“Kwakubuhlungu ngifika, ngi-ngakwazi ukubona umndeni wami kodwa ngibe sengikuleli. Kangikwazanga nokuvakashela abangani bami, ngangizihlalele ekhaya,” kusho yena.
Uthi eGermany nakhona isimo kasikabuyeli kwesejwayelekile, kuhlale kuhlolwa abantu ukubheka ukuthi kabanalo yini igciwane.
“Ngiyethemba ukuthi kulo nyaka kungenzeka sibuyele emsebenzini, sikwazi ukuqhubeka ne-mpilo ejwayelekile. Okubekuhle ngalesi sikhathi, wukuthi sibenesikhathi somndeni nesokuthi umuntu ake aphumule nje nomqondo uthole ukuphumula.
“Kasinaso isikhathi sokuphumula nesokulala (ngenxa yomsebe-nzi).
UMnu Phezani Simon Gwala waKwaNgcolosi, eThekwini, naye ozinze eHamburg – njengoba engomunye wabalingisi nabaculi aba-phambili kwiThe Lion King – uthi lesi sikhathi seCoronavirus sesimenze wangakunamela nokuthola izingcingo ezisuka kuleli ngoba kunemibiko eminingi yokushona kwabantu.
Uthi usencamela ukuthi kube nguye obafonelayo kubo kunokuthi kube yibo abafonayo.
“Yize kunjalo, okuhle ngalesi simo wukuthi sengixhumana kahle namalungu omndeni wami njengoba ngiba nesikhathi esiningi sokuxoxa nawo ngocingo ukuzwa ukuthi isimo siha-mba kanjani,” kusho yena.
Uthi naye ushayekile ngasemalini kusukela ngoNdasa wangonyaka odlule. Uthi ihlandla lesibili leCovid-19, lahlasela ngoMfumfu (October) noLwezi (November) eGermany, kanti kwakusebusika nogaleso sikhathi kuleliya lizwe.
“Ngenhlanhla ngasengivele se-ngibuyele ekhaya ngaleso sikhathi, kodwa nakhona kangi-kwazanga ukufike ngenze izinto eziningi njengoba nginenkampani yokuqopha umculo ngenxa yokuthi izwe lalivaliwe thaqa, kuvalwe nokwenziwa kwemicimbi.
“NgoMasingana (January), kwadingeka ukuba ngiphindele eGermany, nakhona okwaba nezi-ngqinamba eziningi njengoba kwakumele ngihlolwe ukuthi kanginalo yini igciwane.
“Ngisho nokuthola indiza kwakunzima kakhulu ngenxa yokuthi zasezivaliwe ngemuva kokuqubuka kohlobo lweCoronavirus, olubizwa ngeDelta variant,” kusho yena.
Njengamanje uthi ama-theatre aseHamburg asavaliwe, kodwa ngemuva kokugqugquzelwa kwabantu ukuba bagome, unethemba lokuthi maduze kuzovuleleka ukwenziwa kwemicimbi.
Yize kukuningi okungahambanga kahle ngalesi sikhathi, kodwa uthi okuhle kube wukuthola isikhathi esiningi
nomndeni wakhe, abenga-jwayele ukusithola. Yena nomka-khe asebenza naye kwiThe Lion King – banamadodana amabili.
UNkz Sibo Khuzwayo, waseLi-mithill, eMnambithi – oyi-MRI Radiographer eLondon, e-England – uthi ukuhlasela kwaleli gciwane kwafika nezingqinamba ezahlukene kuye njengomama okhulisa indodakazi esencane ezweni elikude nasekhaya.
Uthi ezikhathini eziningi ubeziduduza ngokuthi kumthatha amahora awu-11 nje kuphela ukufika eNingizimu Afrika – obekuthi noma kunesimo esiphuthumayo kubo, akwazi ukusheshe afike – kodwa ukuvalwa kwezwe, kwenze zonke izinto zabanzima.
“Phambilini bengisizakala kakhulu ngokuthi uma sekuphume isikole, indodakazi yami uKhaya (8), igadwe kwi-after school club, kodwa ngenxa yokuvalwa kwezwe, ngibhekane nezingqinamba kwazise wonke abevaliwe.
“Bengiba nenkinga yokungabi nomuntu ozongibhekela yona uma isiphumile esikoleni ngesikhathi mina ngisesemsebenzini. Lesi simo besiphoqa ukuthi kuphaza-miseke amahora ami emsebenzini, obekudala ukuba ngiwakhokhe ngokuphinde ngiqhubeke nomsebenzi sengisekhaya.
“Ngenhlanhla, kangiphazamisekanga ngasemalini ngoba bengi-qhubeka ngisebenza,” kusho yena.
Uthi ugcine ukuba kubo ngoMandulo (September) 2019 kanti kuyamkhathaza ukungakwazi
ukugoduka, abone unina.
Utshele ILANGA ukuthi lesi sikhathi simenze wanquma ukuyeka utshwala.
“Senginezinyanga eziwu-11 ngingabuthinti utshwala ngoba ngabona ukuthi indodakazi yami ingidinga ngokuphelele njengoba kuyimi kuphela umzali wayo. Kusangikhathaza namanje ukuthi kasikakwazi ukwenza izinhlelo zokuvakashela izihlobo nomndeni ngenxa yaleli gciwane,” kusho yena.
UNkz Zanele Buthelezi wodumo lwezindaba oKhozini FM, okuma-nje uzinze enhlokodolobha yaseChina, iBeijing, lapho esebe-nzela khona iChina Radio International, kusukela ngo-2017, uthi kalikho ilungu lomndeni wakhe elithinteke kakhulu ngenxa yalo mkhuhlane, igciwale lawo elaqubuka eWuhan, eChina ngoZibandlela (December) 2019.
“Ngomhla ka-10 kuMasingana (January) wangonyaka odlule, ngavakashela ekhaya, kanti ngaleso sikhathi yayingakasabalali kakhulu indaba yaleli gciwane.
“Indaba yaqala ukuqina sengivele ngisekhaya, okwangenza ngaba manqika ukubuyela eChina ngoba isimo sasilokhu sibonakala siba nzima.
“Ngakhetha ukubuyela khona yize nganginengcindezi yokungazi ukuthi kuzogcina kwenzekeni. Emuva kwezinyanga ezimbalwa isimo sabuyela kwesijwayelekile,” kusho yena.
Ngawo unyaka odlule, kusanda kusabalala leli gciwane, kuneza-khamizi zaseNingizimu Afrika ezalandwa ngokukhethekile eChina, uNkz Buthelezi uthi wakhetha ukungabuyi ngoba ecabangela impilo yabantu bakubo, esaba nokuthi hleze atheleleke ngaleli gciwane khona ebhanoyini.
“Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi okwamanje kasikho isimo esiphuthumayo esingidinga ekhaya. Ngibonga ukuthi umndeni wami usaphephile futhi ngiyafisa ukuthi kuhlale kunjalo,” kusho yena.
Uthi lapho asebenza khona kusenemigomo ebanqanda ukuba baye kwamanye amazwe noma ukusebenza ngaphandle kwaseBeijing uma imvume bengenayo. “Imigomo ebekiwe isaqinile kakhulu,” kusho yena.
Previous articleUthishanhloko usolwa ngokuphatha budlabha imali
Next articleKuboshwe inkosikazi kwelokufa komyeni